Masidlale ialaplaya. Unxweme? Hayi, alaplaya | Iindaba zeGajethi
Alaplaya.eu i-portal yomdlalo ivula ngeSpanish. Yiya kwangaphambili ukuba ukuguqulelwa kulwimi lweCervantes ayisiyonto imbi, kukuba kubi ngakumbi, kodwa ngokubuyisela i-alaplaya ibonelela ngemidlalo ekumgangatho ophezulu kwi-Intanethi ngaphandle kokuchitha ipeni okanye phantse. Makhe ndichaze, kwi-alaplaya unokufikelela kwimidlalo emibini, kukho umdlalo wesithathu endleleni, ukhululeke ngokupheleleyo, ukhuphele ifayile yomdlalo ekuthethwa ngawo, uyifake kwaye ungaqala ukudlala kwi-Intanethi ngobuso. Kodwa njengemidlalo efana Ubomi be sibini Ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso umlinganiswa wakho kwaye ungeze izincedisi, kuya kufuneka ufumane iikhredithi. Kule meko iikhredithi zibizwa ngokuba yi-AP (amanqaku e-alaplaya) kwaye ungazifumana kumdlalo okanye uzithenge ngqo ngekhadi letyala. Ngayiphi na imeko, ndiyaphinda ukuba awunyanzelekanga ukuba uchithe idenariyo ukonwabela imidlalo kwaye ukuthenga amanqaku e-alaplaya kukhetho ngokuzithandela kwaye ngokuzithandela.
BEwe ndiza kungena kulo mbandela ukuze ndikubonise ukuba le portal inikezela ntoni. Kwi-alaplaya uya kuyifumana le midlalo mithathu: Uphicotho, Intsomi yeTennis y Yiza mntwana. Le yokugqibela ayikafumaneki ukuze ikhutshelwe kodwa kuyabhengezwa ukuba kungekudala. Uphicotho ngumdlalo wokudanisa kwisitayile seDancing Stage SuperNova. I-Fanstasy Tennis, kunjalo, umdlalo we-tennis kodwa ugcwele ukhetho. Yiza Usana ngumdlalo wokubaleka ngohlobo olusulungekileyo Umdlalo weKlayiti weCrash.
TYonke imidlalo ilawulwa ngokukodwa ngekhibhodi. Ngokwesiqhelo, isikhombisi kunye namaqhosha ebhodi yezitshixo ngamanye amaxesha anokwanela. Ukudlala kuyakufuneka wenze iakhawunti yasimahla kwi-alaplaya, ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayenza njani kufuneka ufunde «Uyenza njani iakhawunti kwiAlaplaya»Kodwa kuqala ndiza kukuxelela kancinci malunga nenye yale midlalo mithathu ukuze uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukwenza iakhawunti okanye hayi.
Uphicotho ngumdlalo wokudanisa kwi-Intanethi apho kuya kufuneka uhambise amathambo akho ekhuphisana nabahlobo bakho okanye nabadlali abavela kwihlabathi liphela. Nangona kwi-alaplaya babhengeza imifanekiso yakutshanje yesizukulwane, kufanele ukuba kuthiwe banokugqibela kodwa ekugqibeleni, okokugqibela ngekhe. Ngapha koko, inqanaba lingaphezulu komdlalo wasimahla. Njengoko ndingahlali rhoqo kwimidlalo yokudanisa, ngekhe ndikwazi ukukuxelela ukuba ikhoboka okanye akunjalo, kuba ndizamile nje ukukuxelela ukuba isebenza ngokuchanekileyo nangeSpanish. Ukuba ufuna ukuzama, kuya kufuneka ukhuphele ekuphumezayo ukusuka apha kwaye uyifake kwi-hard drive yakho.
SUkuba ucinga ukukhuphela uPhicotho-zincwadi, ndincoma ukuba ucofe kwikhonkco lokukhuphela kuba umdlalo unobunzima be-megabytes ezingama-682 kwaye kungathatha ixesha ukukhuphela. Xa unayo kwi-hard drive yakho kuya kufuneka uyivule kuba iyifayile ye-zip.
Lufakelo lulula kakhulu, kufuneka ucofe kusebenzisekayo kwaye ucofe ku «Faka» kunye «Okulandelayo». Xa ukufakela kugqityiwe uya kuba ne icon kwidesktop onokuthi uqale kuyo umdlalo we-Intanethi. Khumbula ukuba kuya kufuneka unike iimvume eziyimfuneko kwi-firewall yakho kwaye okokuqala xa uqhagamshela inkqubo iya kuhlaziya kwaye kuya kufuneka ungene ngedatha oyisebenzisileyo xa usenza iakhawunti yakho kwi-alaplaya.
Intsomi yeTennis Ihlelwe kwi-alaplaya njengomdlalo we-tennis-rpg okwi-intanethi, andizukubaphikisa kwaye inyani kukuba ngumdlalo wentenetya oya kuthi uguqule i-avatar yakho ifumane amandla amakhulu njengakwi Uguqula yobomi bonke. I-Tennis yeFantasy yenzeka kwilizwe elimnandi apho ungadlala khona ngokuchasene nomnye umdlali okanye kabini. Njengoko uphumelela imidlalo, uya kuqokelela amanqaku aya kukuvumela ukuba ubethe ngakumbi kwaye ukhangele ngakumbi. Inyani yile yokuba icandelo lobugcisa alinakuphikiswa kumdlalo wasimahla, imizobo iyahlaziya kwaye iintshukumo zilulwelo. Ukongeza, iFantasy Tennis ibandakanya iindlela ezininzi zomdlalo ukusuka kumadabi aneeBattlemons ukuya kwiiholide ezenzeka kwitennis eqhelekileyo ebomini kodwa kwindawo entle.
ELo mdlalo ufakwe nakwinto enzima enokuphunyezwa (235 megabytes) ke ukuba uza kuyifaka ungaqala ukuyikhuphela ukusukela apha. Emva kwexesha unokwenza iakhawunti uyisebenzise. Ukufakwa kufana ngokufana noPhicotho-zincwadi, kulula kakhulu kangangokuba ayifuni isifundo okanye imifanekiso ebonisa. Cofa kwindawo ephunyeziweyo kwaye ulandele inkqubo echazwe apha ngasentla.
Yiza mntwana Ukusuka kwinto ebonakalayo kwividiyo-itreyila eboniswe kwialaplaya ngumdlalo wokubaleka othembisa ukuphinda ulonwabele lonke ulonwabo lwemidlalo enje Umdlalo weKlayiti weCrash okanye uMario Kart. Okuncinci okuboniswa yile vidiyo kuphakamisa ukugqitywa kobugcisa obungenakuchukunyiswa. Kuya kufuneka silinde kancinci ukuyivavanya.
BEwe, ukuba uqinisekile ngayo nayiphi na le midlalo, ndiyathemba ukuba uyazikhuphela ngoku. Ukuba ufuna ukubona ukuba uyenza njani iakhawunti kwi-alaplaya ukuze ukwazi ukudlala apha ngezantsi ndikushiyele ikhonkco apho kuchazwa khona ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo. Imibuliso yeVinegary.
Ukwenza iakhawunti kwi elwandle Kufuneka ufunde:
Yenza iakhawunti kwi-alaplaya
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Masidlale ialaplaya. Unxweme? Akukho alaplaya
Ndifuna ukungena ine-auditioneu
Ndifuna ukwenza iakhawuntiaaaaa !!!!!!!!!!!
Molo, ndinomdla kumdlalo wophicotho, sele ndiyikhuphele yonke umdlalo, sele ndiyenzile iakhawunti yam kodwa okwangoku ukuyilayisha ifikelela esiphelweni kwaye akukho nto iseleyo, iyayeka, inyani yile, thetha nomhlobo kwaye undixelele ukuba kufuneka ndikhuphele ii-patches ezithile kunye nothotho lweengxondorha, ndithumele ulwazi kwi-imeyile yam *****@hotmail.com enkosi
Awunyanzelekanga ukuba ukhuphele nantoni na ukuze udlale uphicotho, ngaphandle kokuba unenguqulo yakudala yeDirectX.
kubi akulunganga kukubi kubi kubi akulunganga akulunganga kubi akulunganga kubi akulunganga kubi
Ndibhalisile, kulungile, kunzima kakhulu kuba luthotho lwemigca eliqela, kodwa ukuba ulungile kuyo, intle kakhulu, kwaye ke ukuba uyaphumelela, ikunika imali yokuthenga iimpahla ezingaphezulu.
iingoma zimnandi kwaye ziyathandeka
umdlalo we-teniss awonwabisi kodwa uyonwabile
Ungandinceda ndifuna ulwazi malunga nendlela yokukhuphela ii-pls onokuthi undixelele
Ndifaka intenetya emnandi kodwa xa izakulayisha impazamo iyavela kwaye ithi ayizukuyifumana iserver.Ndingathanda ukwazi ukuba ndenze ntoni ukudlala le tennis kwakhona kuba bendiyithanda kakhulu ...
I-AuditionEU iyonwabisa kakhulu, ndiyacebisa, ingxaki kuphela kukuba kwimeko yam yabambeka kwinqanaba le-5 kwaye ayindinike amava, ingaba ikhe yenzeka komnye umntu? ngubani owaziyo ukulungisa? Ndibuhlungu kakhulu kuba andizukuqhubela phambili snif….
Ukuba baphila kakuhle .. !!
molweni bafana lo mdlalo kufuneka uhlekise kakhulu kodwa kuba andikayidlali andinokuthi ilungile